जापानमा सुमधुर स्वर गुञ्जाउदै बालकृष्ण श्रेष्ठ ( भिडियो सहित )::mirmireonline.com
आ. व.: ०७४/०७५ | दर्ता न: १७८/०७३/०७४ | प्रबन्ध निर्देशक: सिर्जना तिमिल्सिना, सम्पादक: वाशुदेव तिमिल्सना | बिहि, अशोज २०, २०७३
जापानमा सुमधुर स्वर गुञ्जाउदै बालकृष्ण श्रेष्ठ ( भिडियो सहित )
असोज २० टोकियो । भनिन्छ संगीतको भाषा हुदैन , तर भाव यस्तो हुन्छ कि दुनियामा यसको पारखी असंख्य छन् । आफ्नो जीवन र परिवेश अनुसार गीत सुन्ने र गुनगुनाउने प्रचलन त मानवीय स्वभाव नै हो ।
यस्तोमा समाजमा बढ्दो गीत संगीतको प्रभावबाट हाल जापान बसीरहेका बालकृष्ण श्रेष्ठ पनि अछुतो रहेका छैनन् । उनी जापानमा आफ्नो कार्यव्यस्तताका बीच पनि सुमधुर गीत संगीतको गायन र अभ्यासमा जुट्ने गर्दछन् । उनी भन्छन्“ भविष्यमा एउटा राम्रो गायक बन्ने चाहना छ मेरो मैले सके सम्म म प्रयास गरीरहेको छु , आशा छ सबैको माया र सहयोगमा म लक्ष्यमा पुग्ने छु ” ।
सन् २०१३ अक्टोबरमा २४ वर्षको उमेरमा जापान टोकियो पुगेका उनी अहिले उमेरले २७ वर्षको भए ।
सानै देखि गीत संगीतमा खुब रुची राख्ने बालकृष्णका लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ पनि सानै देखि हार्मोनियम र तवला बजाउन सिपालु मात्र थिएनन् , भजन पनि निकै गाउने गर्दथे ।
तीनै लक्ष्मी बहादुर का छोरा बालकृष्ण पनि सानै देखि बुवाको प्रभावकै कारण र आफ्नै रुचीका कारण गीत संगीतमा जम्ने प्रयास गरीरहेका छन् । उनी काम सकेर डेरा फर्किए पछि एक पटक गीत गाउने गर्दछन् । अझ भन्दा उनी भ्याए सम्म बिहान बेलुका विभिन्न गीतहरु गाउन अभ्यस्त हुन्छन् ।
हाल नेपलिज सिंग टुगेटर ( एनएसटी ) का सदस्य समेत रहेका उनले सानै पसलनी गल्ली भन्ने डकुमेन्ट्रीमा सानो भूमिका निभाएका उनले पछिल्लो समय गणेशमान लामा र शितल श्रेष्ठ अभिनित नेपाली चलचित्र “प्रतिज्ञा कठपुतलीको” मा समेत अभिनय गर्ने मौका पाएका छन् ।
मौका मिले राम्रो गायक र अभिनय गर्ने प्रतिक्षामा रहेका बाल कृष्ण जस्तो प्रतिभालाई समयले चिनोस् र उनको प्रतिभा फष्टाउने मौका मिलोस् । उनको सपना साकार होस् , हाम्रो टिम उनलाई हार्दिक शुभकामना र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्दछ ।
उनले जापानमा गाएको प्रेम गीत फिल्मको गीत यस्तो छ भिडियो हेर्नुस् तल :
साथै बालकृष्णका राम्रा राम्रा प्रस्तुति हेर्न उनको फेसबुक पेजमा लाईक र फलो गर्न सक्नु हुन्छ । त्यसका लागी यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् । www.facebook.com/balkrishna.makoto
बिहि, अशोज २०, २०७३ मा प्रकाशित
यस्तो छ मेरो धर्मनिरपेक्ष देशको असली हालत !
कविता – मेरो देश
हुने खानेकी छोरीलाई सेक्सी बनाएर लुट्ने ,दीन दुखीकी छोरीलाई बोक्सी बनाएर कुट्ने !